Rosia: Miresaka ny tsingerintaona faha-20 nirodanan’ny rindrin’i Berlin ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2019 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, bahasa Indonesia, English
Mpanolontsainan'ny filoha Andrei Illarionov teo aloha (aka mpisera LJ aillarionov [RUS]) nanoratra [RUS] tao amin'ny bilaoginy:
Ilya Faibisovich (aka mpisera LJ- faibisovich [RUS]) gaga [RUS] ihany koa tamin'ny tsy fisian'ny dokambarotra:
Tena tsy mampino […] fa ny “Echo of Moscow” [radio liberaly], “Lenta.ru”, “Gazeta.ru”, na izay “vavahadim-baovao” Rosiana mendrika (na ny “RIA Novosti” na “Interfax” “) dia tsy nahitana” zavatra “izay hita ao amin'ny tranonkala eran'izao tontolo izao. Ary ity “zava-miafina” ity dia manana fifandraisana betsaka amin'i Rosia. Ary ankehitriny dia toa tsy misy ifandraisany aminy izany. Saingy misy vaovao marobe (miankina amin'ny tsironareo) toy ireo “mpilalao Sovietika maty”, “firy ny fiarandalamby ananan'i Kim Chen Ir,” polisy sasany nianatra nampiasa ny bilaogy lahatsary [ rohy mankany amin'ny fitaovana GV [ENG]], ary i Ginenburg [Nahazo ny Loka Nobel].
Bilaogera iray hafa, SynthThesis, mandray ny zava-nitranga ho fahavoazana fa tsy fandresena:
Nampiasa sary ireo bilaogera sasany mba hankalaza ny hetsika. Mpisera LJ- Amelito nandefa angon-tsary [RUS] tamin'ny famotehana ny Rindrina. Mpisera LJ Sotvoryaushij Miry [RUS] nizara sary 17. Mpisera-Privet Gernov51 [RUS] nandefa ny filaharan'ny zava-nitranga tamin'ny taona 1989 izay nitarika ny fiafaran'ny Ady Mangatsika [RUS].
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Ivon-toerana Levada tamin'ny Oktobra 2009 [RUS], 63% tamin'ny olona namaly no mihevitra fa zava-nitranga tsara/ tsara kokoa ny Firodanan'ny Rindrina raha mahita izany ho ratsy kosa ny 11 isanjato. Ny Firodanan'ny Rindrina no valinteny malaza faharoa (24 isan-jato) tamin'ny fanontaniana hoe “Inona tamin'ireo zava-nitranga tamin'ny taona 1989 no hitanao fa manan-danja indrindra”; Ny 50 isanjaton'ireo namaly kosa nilaza fa ny fialan'ny tafika sovietika avy any Afganistana ho “zava-nitranga lehibe indrindra” tamin'izany taona izany.